Uvavanyo lweelebhu-Hebei Shenli Rigging Co., Ltd.
Amaziko ovavanyo lwe-Hebei Shenli afakelwe ukuqhuba ukuvavanywa kwemveliso ekrwada kunye nazo zonke iimveliso esizenzileyo. Ukuze sigcine indawo yayo kwintengiso esekwe kwizinto ezisemgangathweni, iimvavanyo kufuneka zenziwe ngokuqhubekekayo. Izinto ezilinganisiweyo zivavanywa kwikhonkco lokugubungela, amagwegwe, amakhonkco, izilingi, ii-tie-downs, ibhloko yetyathanga, ibhloko ye-lever, ibhlokhi kunye nezinye izixhobo ezifanayo.
Shenli esazi isidingo sokuqonda amaziko ayo ovavanyo avunywa yi-CNAS (i-China National Accreditation Service yoVavanyo loVumano) kwaye zonke iimveliso zethu kufuneka kuvavanywe ibhetshi ukuqinisekisa ukuba umgangatho wamkelekile kubo bonke abathengi bethu.
Inkqubo yethu yoLawulo lweQuaity / inkqubo imi ngolu hlobo lulandelayo:
Yonke imathiriyeli yethu ibonelelwa ngurhulumente, siya kuba nengxelo enokulandeleka kwibhetshi nganye yezixhobo, Ibhetshi nganye yenziwa nge-ID yayo kwaye le ngxelo iya kuqhubeka ngexesha lokuveliswa okupheleleyo. --- Oku kuthetha ukuba siyazi ngokuchanekileyo ukuba zeziphi izinto zebatch ezenziwe kwimveliso yokugqibela kwaye siya kuyigcina le rekhodi ngaphezulu kweminyaka emi-5.
2. Iimveliso ezigqityiweyo ziphela:
a.Okokuqala, siza kuqhuba nge-100% yokuhlolwa komhlaba exhomekeke ikakhulu kubasebenzi abanamava besebenzisa igeji yomlinganiso kunye nesikhulisi;
b. Emva koko, siya kuqhubekeka into kunye ne-100% yokufumanisa ukufunyanwa kwemagnaflux ukujonga ukuba ngaba kukho iziphene kumphezulu;
c. Emva koko into yethu iya kuza kwinqanaba lokugqibela lokuba luvavanyo lobunzima ngokuqina kokuqina ukuqinisekisa ukuba iyahlangabezana nemigangatho yeemveliso ezithile.
3. Ugqibezelo loThengiso lweMveliso:
a. Okokuqala yi-100% yotyalomali lomphezulu kunyango lomphezulu; b) Okwesibini kuza kuvavanyo lomthwalo wovavanyo oluqinileyo kunye noomatshini bokuvavanya amandla ohlukeneyo;
b. Ekugqibeleni uvavanyo lokuqina lokudinwa kwiimveliso zeBanga lesi-8 kwaye zonke iimvavanyo ziya kulandela iingxelo kwaye zigcine irekhodi iminyaka emi-5.
4. Ukupakisha okugqibeleleyo
Okokugqibela, inkampani yethu iya kujonga iphakheji ngokweemfuno zabathengi ezahlukeneyo ngeebhokisi, iilogo kunye neepelethi. Ngeli xesha, siya kuthumela yonke imifanekiso kubathengi bethu ukuze sibancede bayazi imeko yeempahla.
I-Shenli iyayiqonda imfuneko yokuba ibonwe ngezixhobo zayo zovavanyo ezivunyiweyo yi-CNAS (i-China National Accreditation Service yoVavanyo loVumano) kwaye zonke iimveliso zethu kufuneka zivavanywe kwibhetshi ukuqinisekisa ukuba umgangatho wamkelekile kubo bonke abathengi bethu.
Izinto ze-1 - Zonke izinto zethu zikarhulumente, siya kuba nengxelo enokulandeleka kwibhetshi nganye yemathiriyeli kwaye le ngxelo iya kuqhubeka ngexesha lokuveliswa okupheleleyo. --- Oku kuthetha ukuba siyazi ngokuchanekileyo ukuba zeziphi izinto zebatch ezenziwe kwimveliso yokugqibela kwaye siya kuyigcina le rekhodi ngaphezulu kweminyaka emi-5.
Iimveliso ezi-2 ezigqityiweyo zotyalo-mali:
Utyalo-mali olugqityiweyo lweMveliso:
Okokuqala yonke i-100% yotyalo-mali lomphezulu kunyango lomphezulu; b) Okwesibini kuza kuvavanyo lomthwalo wovavanyo oluqinileyo kunye noomatshini bokuvavanya amandla ohlukeneyo;
(b) Ekugqibeleni uvavanyo lokukhathala lweemveliso zeBanga lesi-8 kwaye zonke iimvavanyo ziya kulandela iingxelo kwaye zigcine irekhodi iminyaka emi-5.
4. Ekugqibeleni, inkampani yethu iya kujonga iphakheji ngokweemfuno zabathengi ezahlukeneyo ngeebhokisi, iilogo kunye neepelethi. Ngeli xesha, siya kuthumela yonke imifanekiso kubathengi bethu ukuze sibancede bayazi imeko yeempahla.
Siza kwazisa abathengi bethu kwaye sibhukishe ukuthunyelwa.